Mahdi Guled, oo Maqaarsaar noqday iyo Fahad Yaasiin oo madaxa isaga duubay hawlihii socday. | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Mahdi Guled, oo Maqaarsaar noqday iyo Fahad Yaasiin oo madaxa isaga duubay hawlihii socday.
Mahdi Guled, oo Maqaarsaar noqday iyo Fahad Yaasiin oo madaxa isaga duubay hawlihii socday.
Mahdi Guuleed, oo Maqaarsaar noqday iyo Fahad Yaasiin oo madaxa isaga duubay hawlihii socday.
Waxaa si qaawan usoo shaacbaxaday in taliyaha Nabada Sugaddi Soomaaliya Fahad Yaasiin uu wakhtiga yahay ra’iisal aan la magcaabin oo madaxa iskaga duubay guud ahaan hawlaha ka socda waddanka, halka Kusimaha Mahadi M. Guuleed uu noqday maqaar saar aan waxba kala socon arrimaha siyaasadeed ee waddanka kasocda wakhtigan kala guurka ah.
Guddoomiyaha xisbiga Wadajir siyaasi CabdiRaxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa qoraal oo bartiisa facebook kusoo qoray waxa uu ku sheegay hawlaha socda wakhtigan uu badan kooda madaxa iskaga duubay taliya NISA, halka kusimaha ra’iisul wasaarahana aan wax hawl ah loo dirin haba yaraatee.
‘’Doorashadii Hirshabeelle, waxaa lagala hadlayaa taliyaha Nabadsugidda (TN). Xalka Gedo waxaa ka xaajoonaya Madaxweynaha Jubbaland iyo Taliyaha nabada sugidda. Waxaa kulmay madaxweynihii hore iyo TN. Madaxweynayaasha maqan waxaa raadinaya NISA. Horta sii hayihii aaway? mise waa maqaar saar?’’ CabdiRaxman CabdiShakur , ayaa sidaas ku yidhi qoraalkiisa.
Siyaasiga, ayaa soo jeediyay in Farmaajo uu ra’iisal wasaare u magcaabo Fahad Yaasiin, madaama uu waxan oo hawl ah u diray.
‘’Maxaa Raysalwasaare looga baahanyahay mar haddii uu hawlahan taliyaha Nabada-sugiddu hayo? Maa wiilka xilka loo magacaabo illeyn xaajo ugub ah maaha oo horay, ayaa Maxamad Siyaad xilkaan ugu magacaabay Maxamad Cali Samatar oo beesha shanaad ah, beesha sugaysana dacwadii ayaa ka dhamaatee looga faataxeeyo?’’.
Sikastaba ha ahaatee, waxaa muuqata in madaxwayne Farmaajo aanu ilaa hadda wax shaqo ah u igman kusima ra’iisu wasaaraha ee maqaar saarka lagu tilmaamay.
.Midowga Yurub oo u hanjabay hoggaamiyaha adaha xagal daacinaya doorashada Soomaaliya